Fanampiana Mifangaron’ny Mpitsabo Mpanampy Amin’ny Kirizin’ny Fifindrà_monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2016 12:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, русский, українська, Italiano, English
Helen Zahos miaraka amin'ireo aroaina any Lesbos. Sary nomen'ny Aussie Volunteers Helping Refugees any Gresy (pejy Facebook)
Ohatra lehibe amin'ny hoe afaka hanovàn'ny tsirairay ny toe-draharaha ny asa firotsahana an-tsitrapo amin'ny maha olona ataon'i Fr.Helen Zahos ho an'ireo mpitsoa-ponenana. Infirmiera any amin'ny sampana vonjy aina maika sy anaty fiaran'ny mpamonjy voina izy, teraka ny taona 1977 tany Darwin, renivohitry ny Faritra Avaratr'i Aostralia. Lehibe tany Groote Eylandt any amin'ny Golfan'i Carpentaria izy, izay niasan'ireo ray aman-dreniny Grika, mpifindra monina, tamin'ny orinasa mpitrandraka harena ambanin'ny tany, tao amin'ilay nosy.
Nahavita ny ambaratonga faharoa amin'ny fianarana izy, nahazo ny bakaloreà amin'ny fianarana maha-infirmiera sy mpanampy mpitsabo azy tany Darwin izy. Mpanampy mpitsabo nahazo alàlana i Helen hatramin'ny taona 1999 ary mpitsabo anaty fiara mpamonjy voina hatramin'ny taona 2000. Manana fitiavana ny fikarakaràna ny fahasalaman'ireo teratany izy, ary niasa tany amin'ireo vondrom-piarahamonina teratany misintaka alavitra an'ireo tany APY nanomboka ny taona 2006 ka hatramin'ny taona 2009.
Manana traikefa be amin'ny firotsahana an-tsitrapo i Helen. Ny Novambra 2013, nalefa tany Filipina izy tao anatin'ny fiatrehana ny loza voajanahary taorian'ny rivodoza Tadio Haiyan. Ny taona 2014 no nahitàna ny fiompanan'i Helen tamin'ny fahasalamana sy fiarovana ny mpitsoa-ponenana satria izy nampiasaina tao amin'ny Nosy Krisimasy tao amin'ny ivon-toerana fitazonana ireo mpangataka fialokalofana ao Aostralia. Amin'ny fotoam-pialan-tsasatra, nirotsaka an-tsitrapo niaraka tamin'ny fikambanana Medecine du Monde Grece i Helen tany Gresy, nandritra ny kirizy ara-bola, nisahana ireo mpisotro ronono sy ireo tsy nahazo loatra fanohanana ara-pitsaboana. Niasa tao amin'ny ivon-toerana fitazonana tany Nauru ihany koa izy.
Ny Aprily 2015, nirotsaka an-tsitrapo tamin'ny fanampiana ireo tràtry ny loza voajanahary i Helen, tamin'ny horohorontany tany Nepal, niaraka tamin'ny Fikambanan'ny Tsy Mponina Ao Nepal, nankany amin'ireo toerana tena lavitra toy ny tany Ghorka sy Ahrket. Ny Aogositra 2015, raha nameno ny media sosialy ireo sarinà mpitsoa-ponenana, nanao hetsika fanentanana i Helen mba hanangonana vola hahazoana fitaovana fitsaboana, niainga ny volana Septambra mba ho mpirotsaka an-tsitrapo tany Gresy niaraka tamin'ny Medecine Du Monde Grece tany amin'ny Nosy Lesbos. Tany, nahita ireo mpitsoa-ponenana an'arivony mitsoaka an'i Syria sy ireo firenena manodidina izy, ary nanampy ara-pitsaboana azy ireo. Naneho ireo hetsika nataon'i Helen ny gazety an-tsoratra Aostraliana Neos Kosmos , ny volana Oktobra 2015:
Tatitra momba an'i Helen Zahos, Grika Aostraliana, mpanampy mpitsabo mirotsaka an-tsitrapo amin'ny kirizin'ny fifindrà-monina any Lesvos
Taty aoriana, nanisaka ny ezaka nataony i Helen tany amin'ny sisintanin'i Makedonia (FYROM) sy Gresy, izay nahateo azy tamin'ny fanakatonana voalohany ny sisintany ary ireo fikomiana vokatr'izany fotoana fohy taty aoriana.
Hatramin'ny niverenany tany Aostralia, nanangona vola i Helen mba handefasana fitaovana vonjy aina maika any Lesbos, izay fanomezan'ny Ambulance Victoria. Miasa ho mpanampy mpitsabo amin'ny vonjy aina maika izy ankehitriny ao amin'ny hopitaly Gold Coast any Queensland.
Taorian'ny lahatsarinà tafatafa niparitaka be, namaly tamin-katsaram-panahy ireo fanontaniana natao an-tsoratra momba ireo traikefany i Helen.
Kevin Rennie (KR): Mba lazalazao aminay izany atao hoe nitombo tany amin'ny Faritany Avaratra. Ahoana ny fanampian'ireo taom-pianaranao anao, indrindra ireo tany amin'ny Nosy Groote, tamin'ny fanomanana anao amin'ny asanao izay firotsahana an-tsitrapo fanampiana noho ny maha-olona?
Helen Zahos (HZ): Toerana tena tsara hitaizaàna zaza ny tao Groote Eylandt tamin'ny faramparan'ny taona 70 sy 80. Vondrom-piarahamonina kely io fa nanana fanahinà fiarahamonina mahay mifanampy, ary nitombo tao anatin'io fiompanan'ny vondrom-piarahamonina io aho. Tena nihetsiketsika be tokoa tao amin'ny nosy ireo fikambanana toy ny Lions club sy ny Girl Guides, ary nisy hatrany ny mpanangom-bola isan-karazany izay nahitana ahy tao. Ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany tao Groote Eylandt no tena loharanon'ny asa tao amin'ny nosy, izay nisarika mpiasa maro avy tamin'ireo fiaviana maro karazana, avy amin'ireo olona teratany teo an-toerana ka hatramin'ireo mpifindra monina avy amin'ny tany tontolo. Midika izany fa avy amin'ireo fiaviana karazany maro sy kolontsaina maro ireo namako tany am-pianarana tao amin'ny Sekoly Alyangula Area.
KR: Amin'ny iray amin'ireo lahatsarinà tafatafa nataonao, nilaza izao hoe : “olombelona ireo mpitsoa-ponenana… toa ahy sy ianao”. Mba mizarà hoe fihaonanao sasany maneho izany azafady.
HZ: Nisy fihaonana maro izay nieritreretako hoe mety ho izaho io, na mety ho ny reniko na ny raiko.
Niresaka taminà mpampianatra aho, izy ireo izay nitsoaka vavam-basy ary nanantena ny hanorim-ponenana tany Alemàna, ary hampianatra fitaizàm-batana indray indray andro any. Nisy profesoranà anjerimanontolo iray nanampy ahy indray andro, tao amin'ny trano eva/fitsaboana izay nahitànay olona an-jatony. Satria narary ny mpandika teninay tamin'izay andro izay, nanampy ahy tamin'ny fandikàna teny izy ary natahotra sy sadaikatra izy hoe nanao akanjo mitovy foana sy tsy nisolo bà kiraro nandritra ny 3 herinandro.
Niresaka taminà reny izay mpampianatra fahiny aho, mpisolovava ny vadiny, ary bevoka izy, nitondra ankizilahy kely 4 taona niaraka taminy. Navelany tany aoriana tany ny vadiny.
Nanampy vehivavy iray izay nitondra samirery ny fitaovany manokana fanaovany “chimiothérapie” aho, nanana ray izay nandalo “chimiothérapie” nialohan'ny nahafatesany. Tsy nino aho hoe teo amin'ny tranolay maloto, feno vovoka no naorinay izany, sady tsy nisy masinina na fitaovana fanarahana maso, tsy nisy fandrakofana na dite kely akory mba hanampy ny fitsaboana ilay vehivavy hahazoany aina tsara kokoa. Tena mampalahelo… samy manana tantara ny tsirairay ary ary olona mety mifandray aminao.
KR: Nolazainao ny fiheverana anao ho mpamadika teny anivon'ireo olona Grika izay mahita ny asanao miaraka amin'ireo mpitsoa-ponenana ho loza mitatao. Inona no làlana mety hanaronana io lavaka io?
HZ: Misy antony maro mahatonga ireo olona Grika eto an-toerana mahita ireo mpitsoa-ponenana ho loza mitatao, ary mieritreritra aho fa ny tahotra no tena mahatonga izany. Nisy olona maro nanao fanehoankevitra toy ny hoe ‘maninona izy no manampy azy ireo (ireo mpitsoa-ponenana) fa tsy ny vahoaka Grika izay mijaly amin'ny kiziry ara-bola?’ Matetika tsy tsapan'ireo olona manao fanehoankevitra toy izany hoe nirotsaka an-tsitrpo manokana aho ho an'ny vahoaka Grika ao an-toerana ao amin'ny hopitaly “polyclinique” izay ahafahan'ireo mpisotro ronono sy olona mahantra mahazo fikarakaràna ara-pahasalamana sy fitsaboana. Nandefa fitaovana aho ary nanohana ireo fikambanana mpanao vonjitaitra voalohany eo an-toerana izay manohana ireo vahoaka Grika.
Mieritreritra aho fa tena henjana ny raharaha ankehitriny, amin'ireo mpitsoa-ponenana voafandrika ao Gresy, noho ny fanakatonana ny sisintany, kanefa tsy te-hijanona ao Gresy. Nikendry ny handeha ho any amin'ireo firenena hafa any Eorôpa izy ireo, mba hanana asa tsaratsara kokoa ary fanabeazana ambonimbony izay tsy ho afaka omen'i Gresy, ary hihaona hitambatra amin'ireo mpikambana hafa ao anatin'ny fianakaviana. Maro ireo vahoaka Grika eo an-toerana no tsy tia ireo mpitsoa-ponenana hipetraka ao, satria matahotra ny ho very asa sy hoe sao hitombo ny heloka bevava ary hoe hamoaka vola ho an'ny fampiantranoana, sakafo ary tolotra ara-pitsaboana, ny governemanta, ao aminà firenena izay efa miady mafy amin'ny olany ara-bola.
Mandra-pahazoana valiny mazava tsara momba izay mety hitranga amin'ireo mpitsoa-ponenana maherin'ny valo alina miangona ao Gresy ireo, tsy hiova mihitsy ny fijerin'ireo olona eo an-toerana. Maro ireo vahoaka Grika mahatsiaro ny ady, izay ireo Grika no tonga tamin'ireo sambo an'arivony, izany no antony mampandefitra sy mahatonga ireo vahoaka Grika nahazo taona mahatsapa kokoa ny toe-draharaha sy mitsetra ireo Siriana mpitsoa-ponenana .
KR: Tamin'ny fomba ahoana no nandrisika anao tamin'ny firotsahana an-tsitrapo ny fotoana nolanianao tao amin'ireo ivon-toerana fitazonana mpitady fialokalofana tao amin'ny Nosy Krisimasy sy Nauru ?
HZ: Nanome fahafahana ahy hiresaka amin'ireo mpitsoa-ponenana sy mpitady fialokalofana, haheno ireo tantarany ary hahatsapa sy hahazo ny zavatra nandosirany ny fotoana niasako tany amin'ny Nosy Krisimasy sy Nauru. Raha tsy nijanona tao amin'ireo ivon-toerana fitazonana ireo aho, mieritreritra aho fa mety tsy nahazo tsara ny tena vokatry ny zava-miseho. Nahatonga ahy hahatsapa sy hahazo fahalalàna amin'ireo zava-nisy azo nampiasaina sy ny dingana natao tao amin'ny Nosy Krisimasy io, indrindra rehefa misy sambo kely iray tonga miaraka amin'ireo mpitady fialokalofana. Amin'ny fahitàna ny sarin'ireo an'arivony tonga teo amin'ireo nosy Grika hanao fifindràmonina faobe, fantatro fa tena ilaina maika ny fanampiana amin'ny tolo-tànana.
KR: Ahoana no nahitanao ny fikambanana Frantsay tsy miankina Médecins du Monde, ary nahoana ianao no nisafidy ny hiara-hiasa amin'izy ireo? Inona no tena mampiavaka ny vondrom-piarahamonin'izy ireo?
HZ: Fony aho niasa tany amin'ny Nosy Krisimasy ny taona 2014, ary niverina tany Gresy hiala sasatra, nahatsapa ny filàna ny fampiasako ireo fahaizako aho satria nisy tatitra fijalian'ireo vahoaka Grika (indrindra ireo mpisotro ronono) tao anatin'ny kirizy ara-bolan'ny Grika. Tsy nilamina ny feon'ny fieritreretako amin'ny fandehanako any Gresy ary hiala sasatra raha toa mijaly ny vahoakany, noho izany, nikaroka tsotra izay fikambanana mpirotsaka an-tsitrapo nila mpanampy mpitsabo aho. Niresaka tamin-dry zareo tamin'ny alalan'ny imailaka aho ary tsotra be toy izany ilay izy. Nanaraka ireo dingana be dia be amin'ny firotsahana tao amin-dry zareo aho.
KR: Inona no fantatrao momba ny tenanao, ary momba ny hafa, nandritra ireny rehetra ireny?
HZ: Hitako fa tsy ny rehetra no miasa saina; hoe filaza maloto izay manimba ny maha-izy ireo olona ny teny hoe ‘mpitsoa-ponenana’. Tsapako fa rehefa misy loza voajanahary mitranga, mitodika manampy amin'ny heriny rehetra ny tany tontolo, toy ny horohorontany tany Nepal ohatra na tany Filipina taorian'ny rivodoza Hyan, kanefa rehefa vokatry ny ady ny loza, tsy misy mitodika afatsy ireo sivily mpirotsaka an-tsitrapo ary ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana.
Hitako ny amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo tampotampoka fa tsy mitohy, ary ny vokatra ratsy aterak'izany amin'ny ezak'ireo ekipa eny an-kianja, satria hevitra tsara no tao an-tsain'izy ireny saingy kosa tsy tsara rindra.
Tsapako fa resaka politika ny kirizin'ny mpitsoa-ponenana ary tena lavitry ny afo mihitsy amin'ny toe-draharaha ny vahoaka Aostraliana. Hitako fa tena firenena midadasika i Aostralia, kanefa tsy afaka mandray ireo mpitsoa-ponenana 1000 izay mihitsoka amin'ireo ivon-toerana ivelan'ny fitazonana izy ireo, ary mampiasa ireo olona ireo ho fitaovana aminà kilalao izay tsy ananan'ireo olona ireo fahafahana miala amin'izany akory.
Lasa mpisolovava tampoka aho. Amin'ny maha-mpanampy mpitsabo , ampianariny ho mpisolovava ny olona tsaboina izahay, tampoka teo, lasa tafiditra taminà toe-draharaha iray aho, izay ilàn'ireo olona ireo fanohanana ary ilaina mampahafantatra amin'ny olona ny tena zava-mitranga.
Lasa haiko ny nijery ny olona manatrika ahy sy karakaraiko, fa tsy ireo dimy arivo na iray alina, satria mety ho mandreraka be izany. Tsapako ihany koa fa maro ireo olona misafidy ny tsy hikarakara ary tsy hiraharaha ny zava-mitranga.
Mitodika amin'ny lasa aho izao ary mahatsiaro ny fotoana nitsotsorako teo am-pandriana nijery ireo sary tamin'ireo media sosialy sady nieritreritra hoe ‘ afaka manao zavatra aho, afaka mankany aho ary mirotsaka an-tsitrapo’. Ankehitriny, rehefa tafaverina aho, tsapako ny vokatr'ilay toe-javatra tamiko, ary hoe afaka tonga miaraka amin'ny hevitra ianao ary manaraka io, ary mahatonga vokatra tsara eo amin'ny olona. Hoe tsy mila anao ho olona miavaka manokana na manampahaizana. Mila tia sy miraharaha fotsiny ianao, dia mipetraka amin'ny toerany ny zavatra rehetra, ary mila mifikitra tsara amin'ny làlana fotsiny ianao.
KR: Inona no torohevitra omenao an'ireo te-hanova ny fomba fitondran'izao tontolo izao ireo mpitsoa-ponenana mikatsaka fiainana tsaratsara kokoa sy azo antoka kokoa?
HZ: ho an'ireo olona manohana ireo mpitsoa-ponenana ary te-hanampy azy ireo mba hanana fiainana tsaratsara kokoa mendrika azy ireo, milaza aho hoe mahatanjaha tsara ary mahatokisa ny tenanao. Tena misy tantaranà fankahalàna maro ary fenoin'ireo politisiana tahotra ny vahoaka. Mora ny voadonan'ny teny voalaza na mahakivy, fa avy eo kosa hisy tantara, na mety hihaona amin'ny olona manana tantara-nà herim-po mahagaga ianao, ary io dia hampahatsiahy anao ny antony mahatonga anao mahatsapa ho mifofotra amin'ny fanampiana ireo mpitsoa-ponenana.
Afaka hitanao any amin'ny lahatsary maro ny mikasika ny asa firotsahana an-tsitrapo ataoan'i Helen. Antony Shows, nandefa ity tafatafa manaraka ity ny Aprily 2016. Misy rakitsary amin'ny teny Grika ihany koa io.
Ny volana Aogositra 2016, niresaka tamin'i Helen ihany koa ny vohikala Meraki TV. Manomboka eo amin'ny 16.45 minitra ny tafatafany.
Vao haingana, tafaraka tamin'ireo tomponà trano fisotroana kafe any Darwin, izay nanangona vola ary nanampy azy fony izy nandeha tany Gresy, i Helen. Te-hamerina hanangona vola indray izy ireo mba hahazoana vokatra hoe hisidina indray i Helen ary handany ny vola any amin'ireo toby mila izany.
Nanao pejy Facebook ihany koa izy ho an'ireo maniry ny hanampy: Aussie Volunteers helping Refugees in Greece (Mpirotsaka an-tsitrapo Aussie manampy ireo mpitsoa-ponenana any Gresy).
Misaotra an'i Asteris Masouras ato amin'ny Global Voices, avy any Thessaloniki, Gresy, tamin'ny nampihaonany anay.